युगसम्बाद साप्ताहिक - सहमतिको रटानमा स्वार्थको दुर्गन्ध
Tuesday, 04.07.2020, 08:09am (GMT+5.5) Home Contact
सहमतिको रटानमा स्वार्थको दुर्गन्ध
Monday, 06.20.2011, 04:04pm (GMT+5.5)
अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ तर गणतन्त्रले संस्थागत रुप लिनै पाएको छैन । यसमा अनेक समस्या सिर्जित छन् । यो गणतन्त्रको गर्भाधान जसरी भयो त्यो नै समस्याको कारक हो भन्ने धेरैको दृष्टिकोण अहिले पनि छ । जसरी, जुन रुपमा हतारमा गणतन्त्र घोषणा गरियो त्यो नै गलत थियो भन्ने मान्यता राख्ने बुद्धिजीवीहरू अहिले पनि छन् । दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौतालाई अप्राकृतिक मिलन भन्नेहरू अहिले पनि आफ्ना दृष्टिकोणमा अडिग छन् । यदि त्यो प्राकृतिक मिलन हुन्थ्यो भने मुलुकले एक वर्ष पहिले नै संविधान पाइसक्थ्यो र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिसक्थ्यो- लाज घीन पचाएर पटकपटक संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने थिएन । सहमतिको नाममा आफ्नो पल्ला भारी गराउने दाउपेच चलिरहेकै छ । सहमतिको नाममा विमति बढाउनेहरू जनतालाई कतिसम्म उल्लु बनाउँछन् भने- ‘दलहरू सहमतिमा आउने हो भने महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला पनि घोषणा गर्न सकिन्छ्’ भन्नेसम्मका तर्क गर्ने गरेका छन् । आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने शीर्ष दलका नेताहरूलेसहमतिको जति प्रलाप गरे पनि भ्यागुताको धार्नी नपुगेजस्तै सहमति हुन सकिरहेको छैन । कागजमा बुँदामाथि बुँदा थप्दै सहमतिको सहीछाप गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको अपेक्षा मृगतृष्णा बनिसकेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेताहरू इमान्दार नहुँदा मुलुकले अरु कति दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने हो यसै भन्न सकिन्न । अरुले मिलाइदिए मिल्ने, फुटाइदिए फुट्ने र अरुकै उपयोगमा आउनका लागि दलहरूभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्ने काम पनि जारी नै छ । एउटै दलभित्रका नेताहरू त तीनतिर फर्केर बसेका छन् भने भिन्न सिद्धान्त र चरित्र वरण गरेका भिन्न दलहरूबीच सहमतिको अपेक्षा गर्नु मुर्खता सिवाय केही होइन । अहिलेको गतिविधिले देखाएको तीतो यथार्थता यही हो । तैपनि आशा गर्नुको विकल्प छैन । जनता सर्प, विच्छी र भ्यागुताबीच कहिले सहमति होला भन्ने प्रतिक्षामा छन् । तर आश गर्नु- भर नपर्नु भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ गर्ने नेताहरूसंग कुनै आफ्नै दृढ आत्मबल, चरित्रबल तथा जनबल छैन । जनताको भावनाको कदर हुन सकेको छैन । अरुकै उक्साहट र अरुकै स्वार्थमा प्रयोग हुने नेताहरूको चरित्रले मुलुकले कल्पनै नगरेको समस्याहरूको भारी बोक्नु परिरहेको छ ।
"फोहर पानीद्वारा फोहर जत्ति गर हुन्न सफा
काम्य कर्मले कर्मवासना जत्ति गरे पनि हुन्न सफा"
यो अध्यात्मवादीहरूको चिन्तन हो । अहिले कोरा भौतिकवादीको प्रचलित शब्दमा गणतन्त्रवादी बनेका तीन दल, माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले आफ्ना कर्मवासनाका डुङडुङ्ती गनाउने थाङ्ना ओढेर तीन दल सहमतिमा पुग्नैपर्ने र भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने रट लगाइरहेका छन् । सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यही सहमति अनुसार अघि बढ्न भने नसक्ने- यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । २०६८, जेठ १४ गते राति गरिएको पाँच बुँदे सहमति पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । सहमतिको आ-आफ्नै ढङ्गले व्याख्या भैरहेको छ । २०६२ सालको मंसिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौतादेखि २०६८ जेठ १४ गतेको ५ बुँदे सम्झौतासम्म आइपुग्दा प्रमुख तीन दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच दर्जनौं सहमति वा सम्झौता भए र यसबीचमा सरकारसंग अरु दर्जनौं समूह, गुट, संगठन र राजनीतिक दलले सम्झौता गरे । सम्झौताको थुप्रो जसरी चुलिंदै गयो त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पनि चुलिंदै गयो ।
झण्डै आधा दशक पहिले भारतीय नेताहरूको मध्यस्थता र उनीहरूकै ‘एजेण्डा’मा १२ बुँदे समझदारी भयो । त्यो अप्राकृतिक सहमति कसरी भयो ? सर्प, बिच्छी र भ्यागुतोलाई कुन तत्वले मिलायो ? कुन रसायन त्यहाँ प्रयोग भएर त्यसपछि शान्ति सम्झौता लगायत यहाँसम्मका गतिविधि भए ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि के कस्ता षड्यन्त्रहरू भए । संविधानसभालाई असफल पार्ने र मुलुकलाई गृहयुद्धको दलदलमा भास्न के कस्ता खेलहरू भए ? यी सबैको विवेचना गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अरुको स्वार्थ पूर्ति गराउने सहमति हुने र त्यस्तै एजेण्डामा मात्र एकजुट हुने गलत प्रवृत्ति बारम्बार पुनरावृत्ति भैरहेको छ ।
सहमतिमै अगाडि बढ्ने र जनभावनाको कदर गर्ने सोच र संस्कार नेताहरूमा हुन्थ्यो भने जनआन्दोलन-२०६२।०६३ ले उच्चारणै नगरेको धर्म निरपेक्षको घोषणा किन हुन्थ्यो ? राष्ट्रिय एकता भत्काएर मुलुक कमजोर पार्ने संघीयताको निर्णय अनायासै किन हुन्थ्यो । अहिले त्यही विषय सबैका लागि गलपासो बनेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय राज्य, अधिकारका नाममा विभेद र निषेध गर्ने प्रवृत्ति मुलुकभित्रबाट उठेको नभै सात समुद्र पारीदेखि आएका हुन् । हाम्रा नेताहरूले यिनै राष्ट्रलाई घात गर्ने विषयहरूमा सहमति जुटाए तर राष्ट्रिय हितका लागि सहमति भने जुटाउन सकेनन् । अरुको निर्देशन आउँदा सर्प, विच्छी र भ्यागुतो एकै थलोमा बस्यो । जब निर्देशकको इशारा सकियो सबै आ-आफ्नै प्रवृत्ति र स्वाभाव प्रदर्शनमा लागे र १२ बुँदेखि ५ बुँदेसम्म आइपुग्दा यस्तै देखियो । नेताहरूले फोहर सफा गर्न फोहर पानीकै प्रयोग गरे र फोहरले फोहोर सफा हुन्न भन्ने सामान्य ज्ञान समेत उनीहरूमा देखिएन ।
तापक्रम बढ्दै : संकटमोचनको उपाय छैन (06.07.2011)
हिन्दुहरुको समाधिस्थले चाहिं कसरी सम्पदा जोगिन्छ ? (05.30.2011)
‘आणविक अस्त्र’ : त्राससंगै उत्पादको होडबाजी (05.24.2011)